Bakhala ngokungaqoqwa kukadoti - Ilanga News
Home Izindaba Bakhala ngokungaqoqwa kukadoti
Umphakathi waseMlazi wesabela ukuba sengcupheni yezifo
ZISABISA ngokuqhubeka nesiteleka izinkampani ezizimele ezinamathe-nda okuqoqa udoti nga-phansi kukaMasipala we-Theku njengoba kunemibiko yoku-thi sekuphele izinyanga eziwu-5 zi-ngakhokheliwe, kanti sekuphele amasonto amabili udoti ungathu-thwa elokishini uMlazi.
Kuzokhumbuleka ukuthi nango-Nhlolanja (February) izinkampani ezizimele ezinamathenda okuthutha udoti eMlazi, zishiye phansi amathuluzi ngenxa "yokunga-khokhelwa".
Ukungathuthwa kukadoti kuleli lokishi sekushiye umphakathi uthuku-thele. Emuva
kokubhikisha kwezisebenzi zezinkampani ezithutha udoti eMlazi ngeledlule, uMasipala weTheku uphoqeleke ukufaka amaloli awu-21 ukuze kuthuthwe udoti kuleli lokishi.
Lezi zinkampani zivale umgwa-qo, zachitha udoti kuMangosuthu Highway, eMlazi ngeledlule ngoba zifuna kuzwakale izikhalo zazo, okuphazamise ukuhamba kwezimoto.
UNkz Nomvula Ndlovu (38),
waseMlazi, utshele ILANGA ukuthi sekuvamile ukuthi udoti ungathuthwa kuleli lokishi. Uthi kumphatha kabi ukuhlala elokishini elingenayo inhlanzeko ngenxa yokusaphazeka kukadoti.
“Kuyasihlukumeza siwumpha-kathi ukungathuthwa kukadoti ngoba kuyangcolisa futhi kubanga iphunga elibi elingagcina lisiba-ngela nezifo. Into ebuhlungu wukuthi kasixwayiswa uma udoti ungeke uthuthwe, sibona ngokuba iloli lingafiki amasonto elandelana,” kusho uNkz Ndlovu.
Umengameli wenhlangano "yo-somabhizinisi", iDelangokubona, edume ngokumisa ngezikhwepha imisebenzi eMlazi nakwezinye izi-ndawo ezakhele iTheku uma ku-khona engagculisekile ngakho, uMnu Bhamuza Mnyandu, utshele ILANGA ukuthi bazoqhubeka nokungasebenzi uma bengakho-khelwa imali yalezi zinyanga.
“Kudliwa imali kakhulu kulo mkhandlu kanti siyaxhashazwa yi-Meya yeTheku, uNkk Zandile Gumede. Esabelweni sangonyaka odlule kuno-R40 billion okhi-shwe ngonyakamali odlule, kanti yenzeni uma njalo sikhala ngokuthi kasikhokhelwa?
“Sekuyabonakala manje ukuthi le mali idliwa ngomntakabani, na-khu ivalela abantu ejele. Babo-shwa kanjani uma konke kuhamba kahle?” kubuza uMnu Mnyandu.
Okhulumela umasipala weThe-ku, uMnu Musawakhe Mayisela, uthi umasipala ukhathazekile ngo-daba lwaseMlazi.
“Inkontileka encane (sub contra-ctor) nezisebenzi ezithutha udoti, zitelekile ngoba zithi kazihole-lwanga ekubeni umasipala uyikhi-phile imali wakhokhela inkontileka enkulu (main contractor).
“Umasipala ukhiphe amaloli awu-21 ukuthi kuthuthwe udoti kuleli lokishi,” kusho uMnu Mayi-sela. Uthi uMasipala weTheku uthanda ukuxolisa kakhulu kwiza-khamizi zaseMlazi kanti wenza konke okusema-ndleni ukuthi isimo sibuyele kwesi-jwayelekile.
Previous articleUbusisekile uShenge emukelwa ngothando
Next articleKudutshulwe abosizo lokuqala beyosebenza